घरमै बसेर नगद जित्ने अबसर - आगमन खबर
के तपाई घर बस्दा बस्दा दिक्क हुनुभएको छ ?
तपाई यो लक डाउनको समयमा केही नयाँ गरौँ भन्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ ?
नेपाली फिल्म कम्पनी ए.बी. इन्टरनेसनलले नेपाली फिल्म मात्र नभएर बलिउड स्तरको फिल्म समेत निर्माण गर्न सफल भएको ए.बी. इन्टरनेसनलले लकडाउनको समयमा एउटा छुट्टै नयाँ विचारधाराका साथ प्रस्तुत भएको छ ।
अहिले नेपालमा बढ्दै गएको कोरोना भाइरसका कारण पुन: लकडाउनको अवस्थामा पनि केहि नयाँ गरौँ भन्ने भावनाका साथ “LIFE IN QUARANTINE” Online video documentary competition सार्वजनिक गरेको छ ।
तपाईहरुले कम्तीमा पनि ५ मिनेटको भिडियो तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । लकडाउनको समयमा तपाईको समय वा दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ त्यो कुरा भिडियोमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईको राम्रो गतिविधिले गर्दा कोरोना भाइरसबाट जोगिने कुनै नयाँ कृयाकलाप अरुले पनि सिक्ने मौका पाउन सक्नेछन् ।
तपाईको ५ मिनेटको भिडियो अरु कसैको लागि inspiration पनि हुन सक्छ । त्यसैले ढिलो नगरी लकडाउनको समयमा तपाईले बनाएको भिडियोआफ्नो सामाजिक सन्जालमा पोष्ट गर्नुपर्नेछ तपाइले पोस्ट गरेको भिडियोबाट सर्वाेत्कृष्ट भिडियो छनौट गरि पहिलो बिजेताले रु २०,००० र दोर्सो बिजेताले रु १०,००० नगद पुरस्कार जित्न सक्नुहुनेछ ।